🥇 ▷ Samsung Galaxy S11 oo aan lahayn kaarka microSD, laakiin leh 1TB of memory? ✅
Samsung Galaxy S11 oo aan lahayn kaarka microSD, laakiin leh 1TB of memory?
Falanqaynta kadib Galaxy Note 10+ lagu sii daayay kabaxid.pt, waa waqtigii la eegi lahaa waxa Samsung ay bilaabi doonto 6 bilood, cusub Galaxy S11! Hagaag, sida aan ku sheegay dib-u-eegista, in kasta oo taageerada 10 10 ee taageerada microSD ballaarinta kaarka, nooca ‘caadiga ah’ ee Ogeysiiska uusan lahayn… oo sida muuqata tani waxay calaamad u noqon kartaa mustaqbalka kala duwan ee Galaxy S.
Samsung waxay go’aansatay inay ka saarto qofka sita kaarka microSD mid ka mid ah taleefannadeeda gacanta ugu sareeya! Kuwaasoo dad badani ka yaabisay, laakiin sida muuqata waxay leeyihiin ujeedo.
Sidaa daraadeed, goobta la qiimeeyay ee SamMobile waxay sheeganeysaa in Galaxy S11 ay lahaan doonto 4 nooc oo leh awood kaydinta kaladuwan, laga bilaabo 128GB oo ay gaarayaan 1TB. Taas oo u adeegi karta inay miyir-beel qaar ka mid ah xanaaqa taageerayaasha adduunka Android.
Ka dib oo dhan, waxay xitaa u egtahay xeelad caqli badan oo marka hore la joojinayo jawiga taleefanka madaxa, iyo jiilka xiga, ka saar taageerada kaarka microSD.
Sidaa darteed, SM-G981 (Galaxy S11e) wuxuu soo bandhigi doonaa 128GB iyo 512GB, SM-G986 (Galaxy S11) wuxuu lahaan doonaa 128GB, 256GB ama 512GB ugu dambeyntiina SM-G988 (Galaxy S11 +) wuxuu suuqa ku garaacayaa 128GB, 256GB , 512GB iyo 1TB.
Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay inay goor hore tahay in faahfaahinta la soo gabagabeeyo! Sidaa darteed, noocyadaani way is beddali karaan illaa sii-deynta lagu sii daayo bisha Febraayo. (Hadaadan xasuusan, waxaa sidoo kale jiray warar xan ah oo sheegaya xarafka 10 ee leh 1TB)
Marka la soo koobo, midkoodna kuma andacoonayo in Samsung ay ka saari doonaan booska microSD kaarka… Laakiin waa wax aan la dafiri karin in ka saarista Qoraalka 10 ay ahayd tijaabo yar oo suuqa gashay! Haddii taasi si fiican u socoto, waxay noqon kartaa dhiirigelin wanaagsan in horay loogu socdo qorshaha weynaanta Kuuriyada Koonfureed.